AS: ဗိုက်တာမင် A
နို့၊ ထောပတ်၊ အသည်း၊ cheese၊ မုန်လာဥနီ၊ ဟင်းခနီ (ဟင်းနုနွယ်) (spinach)၊ လိမ္မော်ရောင်နင့် အစိမ်းရင့်ရောင် အသီးအရွက်များ။
မျက်စိအာရုံ၊ အသားအရေ၊ နခေါင်းကြောင်းတမ်းများ၊ ပ ဇ၊ အစာချေပျက်ခြင်းနာင့်ဆီးပိုင်းဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းများ၊ ကိုယ်ခံအားလုပ်ငန်းရပ်များ စသည်ရို့ကို ထိန်းသိမ်းပီးခြင်း။
ဗိုက်တာမင်ဓာတ် နှစ်ရှည်လများ နည်းပါးကေ ဖြစ်တတ်သော လက္ခဏာတိ
ညဉ့်ဘက် မျက်စိမှုန်ခြင်း၊ အရီပြားခန်းခြောက်ခြင်းနင့် အရီပြားကွာခြင်၊ ကူးစက်ပိုးများ ၀င်ရောက်လွယ်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ် မဟိခြင်း၊ သွီးနီဥ နည်းခြင်း (anemia)၊ ကျောက်တည် ရောဂါ(kidney stones)
ဗိုက်တာမင်ဓာတ် အလွန်အမင်းများလာကေ ဖြစ်တတ်သော အကျိုးဆက်တိ
အသည်းထိခိုက်မှု၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှုနင့်မွီးလာရေအဘုချေမှာ ချို့ယွင်းချက်တိပါလာမှု၊ ဂေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ခြင်း၊ မူးနှောက်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံ နှစ်ထပ်ဖြစ်လာခြင်း (Double Vision)၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရိုးဆန်းများ ဖြစ်ထွန်းလာခြင်း။
Insel. Paul M.; Roth, Walton T.; Core Concepts in Health with Additional Readings from Georgia Institute of Technology, page 339, 10th Edition, Mc Graw Hill, New York, 2008.
Posted by Kyaw Htoo Aung at 12:55 PM